नारीप्रधान कथासंग्रह: कमरेड भाउजू | samakalinsahitya.com
नारीप्रधान कथासंग्रह: कमरेड भाउजू
कमरेड भाउजू तेह्रवटा कथाहरूको सँगालो हो। पहिले बेल्जियम र हाल बेलायतबाट प्रकाशित हुने अनलाइन साहित्यिक पत्रिका समकालीन साहित्य डट कमका प्रकाशक, सञ्चालक तथा साहित्यकार कृष्ण बजगाईंद्वारा लिखित यो कथासंग्रह सन् २०१५ को आगमनसँगै बजारमा आएको हो। शब्दार्थ प्रकाशन प्रकाशक रहेको यो कथासंग्रह कथाकार आफैंले बेलायतमा रहेको कार्ल मार्क्सको समाधिस्थलबाट विमोचन गरे। किन त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले भनेका छन्– ‘पहिलो पटक पढेको कार्ल मार्क्सको रचनाबाट प्रभावित भएको र संग्रहका कथाहरू पनि प्रायः समाजवादीहरूसँग सम्बन्धित भएकोले त्यसैबाट उत्प्रेरित भएर त्यहाँ विमोचन गरियोे।
जे होस्, यस संग्रहमा संगृहित कथाहरूमध्ये बजगाईंले केही कथाहरूमार्फत समाजवादका नारा दिनेहरूलाई चोटिलो व्यंग्य गरेका छन्। दशबर्से माओवादी आन्दोलन स्थगनपछि तिनका नेता र कार्यकर्ताहरूमा आएको विचलन अर्थात् पुँजीवादतर्फको आकर्षणलाई कडा व्यंग्यको विषय बनाएका छन् यस कथासंग्रहमा। विशेष गरी माओवादी आन्दोलनमा लागेकाहरूले चन्दाको नाममा जबर्जस्ती उठाएका, लुटेका सम्पत्तिको कसरी अपचलन गरे ? कार्यकर्तालगायत नेताहरूमा सम्पत्तिमोह र आर्थिक अपचलनले तिनका राजनैतिक मुद्दा र नारा कसरी खोक्रो रह्योे ? अन्ततः पुँजीवादकै शरणमा कसरी परे भन्नेजस्ता विषयहरू हुुन् कथाका प्रस्तुति।
संग्रहका ‘कमरेड भाउजूु तथा ‘पलायन कमरेडु दुई कथाले उपरोक्त प्रस्तुतिलाई छर्लंग पारेको छ। तर संग्रहका सम्पूर्ण कथाहरूमा पुँजीवादमा पलायन हुने कमरेडहरूलाई मात्र व्यंग्य गरिएको छैन, अपितु केही कथा यौनका छन्, केही कथा पारिवारिक छन् त कुनै सामाजिक। तर समग्रमा हेर्ने हो भने यो संग्रह नारीप्रधान कथासंग्रह हो ।
लेखक आफू रहेको स्थान बेलायती परिवेशमा लेखिएका कथाका मुख्य पात्रहरू नारी नै छन्। नारीका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। नारीका सबै रूपहरू ‘मंगलग्रहमा देवकोटाको शालिकु कथाबाहेक बाँकी सबै कथाहरूमा पढ्न पाइन्छ। अर्थात् बाह्र कथाहरूमा नारीका विभिन्न चरित्रहरू जस्तै– कमरेडकी श्रीमती, पत्रकारिता गर्ने, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्ने तथा अनुसन्धान गर्ने र यौनभोगीजस्ता नारी–चरित्रहरूलाई कथामार्फत उदांगो पारिएको छ। त्यसैले यो कथासंग्रह नारीप्रधान कथासंग्रह हो। भलै लेखक आफैँले यस संग्रहलाई ‘डायोस्पोरिकु भनेर उद्घोष गरेका छन्। जुन सहर्ष स्वीकार्न सकिन्न।
कथाकारले ठाउँ–ठाउँमा आफ्नो लेखन चातुर्यता देखाएका छन्। संग्रहका कथा पढ्ने क्रममा केही ठाउँमा पाठक एकछिन् टक्क अडिएर ‘लेखक यहाँ चुक्यो भन्ने ठान्न सक्छन्। तर स्वाभाविकरूपले फेरि कथा पढ्ने क्रम अघि बढ्दा एकछिन् अगाडि लेखक चुक्यो भनेर ठानेको घटनालाई लेखकले चलाखीपूर्वक सच्याएको पाइन्छ। मलाई यो लेखकको कलाकारिता हो जस्तो लाग्यो। लेखकले आत्मकथ्यमा उद्घोषण गरेझैँ सबै कथाहरू विदेशी भूमिकै परिवेशमा रहेका नेपालीहरूका वरिपरि घुमेका छन्। सबै कथाका पात्रहरू विदेशी माटोमा नेपाली पसिना बगाइरहेका छन्। आफ्नो भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न पछि परेका छैनन्। शायद यसैले पनि हो कि लेखकले यस संग्रहलाई डायोस्पोरिक भन्न चाहेका। तर यस शब्दलाई अंग्रेजी शब्दअनुसार उच्चारण गर्ने हो भने पनि डायस्पोरिक भनिनुपथ्र्याे। लेखकले कसको नक्कल गर्न चाहेका हुन्, बुझ्न सकिएन।
कृष्ण बजगाईंको यस कथासंग्रहको अर्काे विशेषता भनेको कथाका विदेशिएका पात्रहरूले कर्मभूमिलाई सरापेर गाली गर्दै असन्तुष्टि जनाएका छैनन्। वास्तविकतामा हेर्ने हो भने प्रायले कर्मभूमिउपर गुनासो गर्दछन्। अधिकांश आप्रवासीहरू स्वेच्छाले आएको कर्मभूमिलाई गाली गर्दै त्यहीँ वर्षाैं बिताइरहेका हुन्छन्। तर यस संग्रहमा यस्ता पात्रहरू भेटिन्नन्।
जे होस्, संग्रहको आवरण र साजसज्जा आकर्षक नै देखिन्छ। तर भित्री डिजाइनका पाना र फन्ट हेर्दा कताकता स्वस्थानी किताबका पाना पल्टाएझैँ अनुभव हुन्छ। यस कथासंग्रहका भाषा तथा संवादहरू निर्बाधरूपमा बगेका छन्। सरल र सरस छन्। समग्रमा कमरेड भाउजू एक पठनीय र स्वादिलो कथासंग्रह हो। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको शतप्रतिशत नभए पनि अधिकांशको प्रतिनिधित्व गर्ने यो कथासंग्रह नेपाली साहित्यमा एउटा कोसेढुंगा हुनेछ भन्ने विश्वास गर्ने आधार कथाकार कृष्ण बजगाईंले बनाएका छन्।
बजगाईंसँग युरेसिया घुम्दा
संस्था बोक्ने कि चढ्ने ?
अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई